Banyere Anyị - Hebei Monteono Machinery Technology Co., ltd.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ na haịdrọlik hama
Hebei Monteono ígwè technology Co., Ltd.Emi odude ke ụlọ 1705, ngọngọ B, JINYE ụlọ, NO.282 ZHUHE ụzọ HANSHAN DISTRICT, HANDAN CITY, HEBEI, Anyị bụ ndị a otu ụlọ ọrụ, tumadi aku haịdrọlik hama na-akwado ngwaahịa. Anyị nwere 10 afọ na-arụ ọrụ ahụmahụ. Anyị isi ngwaahịa na-agụnye haịdrọlik hama, chizul, azụ isi, n'ihu isi, pistin, ohia, mkpanaka pin, mkpọchi pin, chizulu, jaket, elu na ala cylinder ngọngọ, akara mmanụ, wdg
Companylọ ọrụ anyị nwere hama site na obere ụdị nke nnukwu ụdị, yana usoro bara ụba, ụdị zuru oke, hama kwesịrị ekwesị maka mkpọmkpọ ụlọ, ụzọ gbajiri agbaji, ntinye, nkume gbajiri agbaji na ebe ndị ọzọ na-ewu ụlọ,
Anyị sonyere nile di iche iche nke oru nkwukọrịta na imekọ ihe ọnụ ifịk ifịk, Ka ọ dịgodị, anyị wulite ezi imekọ ihe ọnụ image na echiche nke bụ mmata mma nke nka na-eme ememe site na ọtụtụ media, web, Anyị na-rube isi enterprise echiche nke ezi mma, elu aha, kwalite akara mba.
Na-ewu nke oru ngo, uru nke ihe demolition na m ọrụ bụ ihe doro anya. The ụlọ ọrụ na-etinye ngwaahịa mma dị ka enterprise ndụ, n'ịgbaso "ezi obi, pragmatic, mmepe" azụmahịa nkà ihe ọmụma, na-anọgide na-emepụta uru maka ịchụso ihe mgbaru ọsọ maka ndị ahịa, ike n'ike mmụọ ewu, ịgbasa ahịa na magburu onwe ya mma na ọrụ, iji mepụta mmepe, iji nweta uru na mmeri na ndị ahịa.
Anyị na-emepụta ọtụtụ chizul, kamakwa dị ka ndị ahịa Eserese maka mmepụta.
- Anyị na-agbalị kacha mma anyị na-akwado ozugbo mgbe-sales ọrụ maka n'ụlọ-mba ọzọ ahịa ụwa mbụ na klas ngwaahịa